Weerar lagu qaaday masjid ku yaala Zurich iyo seddax Soomaali ah oo lagu dhaawacay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Weerar lagu qaaday masjid ku yaala Zurich iyo seddax Soomaali ah oo lagu dhaawacay (SAWIRO)
Waxaa habeenkii xalay weerar lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Zurich ee dalka Switzerland, halkaasi oo lagu dhaawacay ilaa seddax soomaali ah.
Nin la sheegay inuu hubeysnaa ayaa rasaas ku furay masjid ku yaala magaalada Zurich, halkaas oo xiligaasi dad badan ku sugnaayeen.
Weerarkaasi ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen seddax qof oo dhalasha ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood dhaawacyo culus soo gaaray.
Masjidka la weeraray ayaa la sheegayaa in xilligii la weeraraayay ay ku sugnaayeen dad u badan oo isugu jira Soomaali, Carab iyo Eritereyaan, waxaana goobta islamarkiiba ka baxsaday ninkii weerarka kusoo qaaday.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeeysa weerarkaan lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Zurich.
Ciidanka booliiska dalkaasi oo weerarka kadib soo gaaray goobtaasi ayaa gebi ahaan xiray dhamaan wadooyinka soo gala masjidka, iyadoo wax yar kadib meydka qof kale laga helay goob aan sidaas uga sii fogeyn masjidka, waloow meydkaasi aan la aqoon inuu wax xiriir ah la leeyahay weerarka lala beegsaday masjidka iyo inkale.
Si kastaba, ma ahan markii ugu horeeysay oo weerar ceynkaan oo kale lagu qaado masjid ku yaala dalka Switzerland, gaar ahaan magaalooyinka Zurich iyo Geneva.
Warbaahinta dalka Switzerland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka hadleeysay warar ka dhan ah qaar ka mid ah masaajida ku yaala dalkaasi, halkaasi oo ay ku sheegeen inay isugu yimaadaan dad xagjiriin ah.